बे,पत्ता व्यक्तिको खो,जी भइरहँदा ह,रा,एका व्यक्ति पनि आफ्नै खोजी अभियानमा जुटेका थिए”:: Mero Desh
बे,पत्ता व्यक्तिको खो,जी भइरहँदा ह,रा,एका व्यक्ति पनि आफ्नै खोजी अभियानमा जुटेका थिए”
Published on: १४ आश्विन २०७८, बिहीबार ११:२८
काठमाडौं। टर्कीमा एउटा निकै अनौठो घ,ट,ना भएको छ यहाँ बे,प,त्ता भएका एक व्यक्ति आफ्नै खोजी अभियानमा जुटेका थिए । उनलाई यो कु रा थाहा समेत थिएन कि मानिसहरु जुन व्यक्तिलाई खोज्दे जं,गलमा घुमिरहेका छन् ती ह’रा’एका व्यक्ति उनी आफैं हुन् । यद्यपि यसो हुनुमा ती व्यक्तिको पनि कुनै गल्ती थिएन ।
टर्किश मिडि या एनटिभीको एक रिपोर्टअनुसार खासमा बेहान मुतुलु नामका ५० वर्षका ए क व्यक्ति आफ्ना साथी हरुसँग ड्रिक गर्नको लागि घरबाट टाढा इनेगोल सहर गएका थिए । तर, यही बीचमा उनी साथीहरुबाट छुट्टिए र कतै ह,राए । स्थानीय मिडियाका अ नुसार उनी नशाको हालतमा जं,गलमा ह,राएका थिए ।
जब बेहा न मुतुलु फर्किएनन् त्यसपछि उनका साथीहरुले पुलिसलाई सूचना दिए ।पुलिसले पनि बे,पत्ता भएको रिपोर्ट लेखेर उनको खोजी को लागि सर्च अभियान सुरु गर्यो । धेरै समयसम्म जंगलमा खोजी गर्दा पनि मुतुलुको कुनै सूचना पाइएन । यही बीचमा पुलिस अधिकारीहरुले जंगलमा मुतुलुको नाम चिच्याएर बोलाए ।
पुलिसले बोलाएपछ मुतुलुले पनि जवाफ दिए । त्यसपछि पुलिसकर्मी यो देखे र चकित प रे कि मुतुलु त पूरै समय सर्च अभियानमा उनीहरुको साथमै ह,राएको मान्छे खोज्दै हिँडेका थिए ।खासमा मुतुलुले कोही व्यक्ति ह,राएकोले सर्च अभियान सुरु गरिएको थाहा पाएपछि हराएका व्यक्ति खोज्न जंगलमा गएका सुरक्षाकर्मी र
अन्य व्यक्तिहरुको साथमा आफू पनि खोजी अभियानमा सहभागी भएका थिए । तर , उनलाई ह,राएको व्यक्ति को हो भन्ने थाहा थिएन । उनलाई कोही अरु नै व्यक्ति हराइरहे को भन्ने लागेको थियो । उनलाई हरा,एको व्यक्ति आफू नै हो भन्ने त रत्तिभर लागेको थिएन ।पुलिससँग मुतुलुको कुनै तस्वीर पनि थिएन । मुतुलुलाई पनि उनीहरुले आफूलाई खोजिरहेका छन् भन्ने थाहा थिएन ।
रिपोर्टका अनुसार जब बेहान मुतुलुले जंगलमा पुलिसले आफ्नो नाम बोलाइरहेको सुने त्यसपछि भने ‘तपाइँहरु कसलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ ? म त यहाँ छु ।’ मिडिया आउटलेट वजियतले ट्वीटरमा एउटा तस्वीर शेयर गरेको छ जसमा मुतुलु पनि खोजी अभियानमा अन्य सदस्यहरु सँगै छन् ।Dcnepalbata
स्वास्थ्या मन्त्रीले मन्त्रालयमै प्रेमिकालाइ चुम्ब,न गरेको कारण राजिनामा
बिहेमा बे‘हुली देख्ने वि’त्तिकै बेहुला बे‘होस् भएपछि..।
सुटिङमा बन्दुक प्रयोग गर्दा निर्देशक आफै घा,इते, फोटोग्राफिको मृ,त्यु
सुँगुरको मिर्गौला मानिसमा प्रत्यारोपण गरेपछी ….
बिना मेकअप श्रीमतिलाइ न,राम्री देखेपछी बिहेको भोलि पल्टै श्रीमानले दिए उ,जुरि